Inkampu yasehlotyeni yamaYuda yatshatyalaliswa kwimililo yasendle yaseCalifornia kodwa iiNkokheli zabhambathisa ukuphinda ziyakhe. - Usnews
Inkampu yasehlotyeni yamaYuda yatshatyalaliswa kwimililo yasendle yaseCalifornia, kodwa iiNkokheli zithembisa ukuphinda zakheke.
Malibu, California Ithunyelwe ngoNovemba 13, 2018, 8:36 pm UAdam Panish
Iintsalela ezitshisiweyo zezakhiwo eCamp Hess Kramer zashiywa ngasemva ngumlilo waseWoolsey.
UMALIBU - UBryna Nevison wajikeleza iindonga ezimbalwa eziseleyo zenkampu yamaJuda yakudala, ekhupha iifoto ezininzi kunye nezinto zobugcisa awayenokuzithwala ukuba unokubuya umlilo.
Wayengekaqondi ngokupheleleyo ukuba umlilo waseWoolsey, otyhutyhe iMalibu kunye nommandla oyingqongileyo ngempelaveki, utshabalalisa amakhulukhulu ezakhiwo kunye neehektare eziphantse zibe ngama-97,000, uphantse wayicima iCamp Hess Kramer kunye nenkampu yodade wabo, iGindling Hilltop.
UBrianna Amasaka / Iindaba zeBuzzFeed
Ngokukhawuleza ehlolisisa izakhiwo ezimnyama, ezishwabeneyo kunye nemfumba yeenkuni ezazikade ziphethe imisongo yeTorah yamandulo yecawa, lo mfana oneminyaka engama-26 ubudala waya kumagumbi aseleyo waza wathabatha oko wayenokukuphatha.
izimvo zamagumbi emidlalo
Amadoda aselula, ancumayo anxibe i-yarmulkes adlula njengoko wayefaka imifanekiso emotweni. Uninzi lusuka kwiminyaka yoo-1950, xa uRabi uAlfred Wolf wafudukela eLos Angeles ukuya kujoyina iTempile yaseWilshire Boulevard waza wagqiba ekubeni enze inkqubo yokuqala yokukhempisha yabantwana abangamaYuda kwintshona yeMississippi.
Emva kokubaleka iJamani yamaNazi, uWolf waqhutywa ukuba enze iindawo ezikhuselekileyo, ezivulekileyo apho abantu abancinci abangamaYuda, abantwana kunye nabakwishumi elivisayo abavela kubuKristu, amaSilamsi, kunye nezinye iinkolo kunye nemvelaphi babenokuhlangana, banxibelelane, bafunde ngaphandle komgwebo, utshilo uDonald Levy. umlawuli wonxibelelwano wetempile.
iindleko zokuthenga indlu
URabhi wakha i-Hess Kramer ngo-1952 ngaphakathi kwi-canyon engaphandle kweMalibu. Wamisa iHilltop ngaphezulu, ejonge ulwandle, kwiminyaka embalwa kamva ngo-1968.
Ukusukela ngoko, ngaphezulu kwe-40,000 yabantu abatsha abavela kulo lonke elase-US bachithe ihlobo labo enkampini, besitya umpheki odumileyo kaJohn Bard wetshizi egcadiweyo, ebhinqa iingoma, enyusa iindonga zokukhwela amatye, kwaye enxibe ngolwesihlanu omhlophe ukubhiyozela iShabbat kufutshane nolwandlekazi lwePasifiki.
Amagorha awonzakeleyo, imibutho eliqela ye-LGBT, kunye neSithili seSikolo esiManyeneyo saseLos Angeles nabo bahlala besebenzisa izithuba zokubamba ukurhoxa.
Ecaleni kweNdlela eNxweme yasePasifiki enamagophe, ukumenyezela kwemenorah enkulu, esiliva ejonge kude kwiinduli eziluhlaza ibisoloko ibonakala. Kwaye kwakuselapho ngoMvulo, ijikelezwe ngumhlaba otshisiweyo.
Phakathi kweenkumbulo kunye nezithuba ezibuhlungu zeendaba zoluntu kunye neefowuni kwakukho izibhengezo zokomelela kunye nezithembiso zokwakha kwakhona.
'Siza kuba kunye kweli hlobo. Kuya kubakho inkampu. Emva koko, siya kwakha kwakhona. UHess Kramer kunye neHilltop baya kunyamezela,' iinkokeli zeenkampu ubhale kuFacebook ngeCawa, bekhumbuza uluntu lwabo ukuba abaqhelekanga kwiingxabano.
Umlilo weWoolsey utshabalalise izakhiwo zayo ezingama-87 kwezingama-97, wayitshabalalisa ngokupheleleyo i-Hilltop. Apha ngezantsi, ecaleni komlambo kwaye ubuyele umva kumwonyo ozele yimisikamore, yiholo yokutyela kuphela, iikhabhini ezimbini, iofisi, kunye nemenorah eyenziwe ngomthi eseleyo. Kwindlu yecawa etshiswe ngokuyinxenye, izihlalo zomthi zisajonge phambili.
'Kufuzisela ntoni oko?' Utshilo uNevison.
Isigcawu esikhulu sehalloween
Ebambe imfumba yeefreyimu, uNevison, ocwangcisa imisitho yeenkampu, wathetha ngembali yabo, malunga nendlela abasingathe ngayo imitshato yamaqabane ahlangana apho esakhula, iinkqubo zabantwana abachatshazelwe yi-HIV/AIDS, amaqela olutsha amkela imivuzo ephantsi, kunye ukuhlanganisana kwabo baqalayo ukumisa iinkampu, abo bakha 'izakhiwo ngezandla zabo.'
Kwii-imeyile, iifowuni, Izithuba zikaFacebook , ii-tweets, kunye nemibhalo, abantu bakhumbula iiseshoni zomdaniso osisiyatha, obilayo owavela kusasa nangokuhlwa ngelixa becula imithandazo yamandulo phezulu kwimiphunga yabo, eyokuqala ukwanga, abahlobo abasenyongweni, ukubaleka ukubamba amanzi ashushu aseleyo kwishawari. kusasa, kwaye bechaza, ngokwemiqathango yabo, ukuba ubuYuda bumele ntoni.
Rhoqo ehlotyeni kangangeminyaka eli-10, uMark Novick wayedla ngokubhabha esuka e-El Paso, eTexas, aze abaleke aye ‘kwihlabathi elahluke gqitha kwelo ndandikhula.
Wayezolile yaye engakhululekanga, watsho, kodwa kuloo mwonyo ushushu nozele ngumgamthisi, 'kwakulungile ukwahluka.'
UMichael Hiltzik @hiltzikm
@bposton Ilusizi kakhulu..izizukulwana zeentsapho zamaJuda zikhumbula le nkampu ngothando olukhulu, kubandakanya nam nonyana wam..
02:39 AM - 13 Nov 2018
bukela usuku lwe-macys parade
'Kwakulungile ukuba ndim,' watsho. 'I-Camp Hess Kramer yalungisa ubuntwana bam ngendlela yokuba nangoku, kwiminyaka engama-30 kamva, ndisaziva phantse yonke imihla. Oko kwandifundisa, ngaphezu kwako konke, abantu ophila nabo abona butyebi bubalulekileyo obunokukunika bona eli hlabathi.'
URuth Cohen akazange akwazi ukulinda ukuba abe njengomama wakhe, owayengumcebisi ngeminyaka yee-1950. Ukhumbula ihlobo lakhe lokuqala eHess Kramer njengomntu onentloni oneminyaka eli-9 ubudala. Xa wayeneminyaka eyi-15, wadibana nomfana ogama linguJack. Wamanga kwiminyaka emithathu kamva kwi-amphitheatre ka-Hess Kramer ngoku kutsha ngo-Agasti ngobusuku phantsi kweenkwenkwezi kwaye yayiyiloo nto.
Batshata ngo-1991. Abantwana ababini kunye nokufuduka okuninzi kamva, wathi umhlobo wakhe osenyongweni wajika waba ngumyeni wasindisa ubomi bakhe.
'Bendisilwa nesifo sesibindi iminyaka esixhenxe kwaye bendingahambi kakuhle,' utshilo oneminyaka engama-52 ubudala ehlala kwikhaya lakhe eDenver. 'UJack wajika waba ngumdlalo ogqibeleleyo kwaye wanikela nge-60% yesibindi sakhe kum kwaye wasindisa ngokoqobo ubomi bam.'
U-Evan Cowitt usenako ukungcamla i-greasy crunch yentlanzi eqhotsiweyo kwityotyombe elidumileyo lokutya kwaselwandle elingezantsi kwe-Hess Kramer, apho yena neqela lakhe lobunkokeli benkampi bebehlanganisana minyaka le ukusukela ngo-1982 phambi kokuba basonge indlela eya kwindawo yemidlalo yeqonga ukuze bahlangane.
Xa buhlwa, babecula ‘umthandazo omnye wokugqibela,’ ngokuphathelele indawo yokuhlala. Usawazi amagama athi:
Sikhusele ngaphantsi kwamaphiko akho, Yehova.
Sigcine kuzo zonke izinto ezimbi, Yehova.
Sigcine sikhuselekile ubusuku bonke, de sivuke ngokukhanya kwasekuseni...
KuSasha Feldstein, inkampu ngokwenene yayingengomYuda - yayimalunga noluntu, ubuhlobo, kunye nokudala iindawo ezikhuselekileyo, ezamkelekileyo.
'Ngaphezu konqulo, inkampu imalunga nokwamkelana ngoko bakuko nokufunda ukuhlala kunye ekuhlaleni kwaye ezo zizimiselo nokuba ungoweyiphi na inkolo okanye imvelaphi,' yatsho le ndoda ineminyaka engama-32 ubudala.
Usandul’ ukutshata neqabane lakhe leminyaka eli-12, uMike Latner. Bathandana njengabacebisi beekholeji e-Hilltop. Watshintshela izikolo ukuze zibe kufutshane naye eNew York, kwaye phantse ishumi elinesibini labahlobo benkampu babesemtshatweni wabo.
Kodwa kuNevison, ilahleko evela kumlilo weWoosley ifike ekhaya ngokwenene. Ebesebenza kwaye ehlala kwindawo yenkampu ukusukela ngoJuni, kodwa wakwazi ukuphuma nezinto azithandayo: inja yakhe, isiginci, iincwadi kunye nempahla.
Yonke enye into imkile. Kodwa yena, njengamanqaku abanye abaye babelana ngeenkumbulo zabo zikaHess Kramer, akanaxhala.
'Ndifuduke amaxesha amaninzi ahlukeneyo kwilizwe lonke kwaye eyona nto ndiyithandayo ngale nkampu kukuba bangaphi abantu abasayibiza ngokuba likhaya,' utshilo. 'Kwaye njengoko urabhi wethu watshoyo, ikhaya likhulu kunezakhiwo.'
igumbi lokulala elimnyama nelimhlophe
izimvo zangasese ezincinci kakhulu
Iipali zeHalloween zabantu abadala